Ku Dadaalida Dhanka Cadaalada Jinsiga Arinta #3 - Ballanqaadka Hoggaanka ee Cadaalada Jinsiga - Wadashaqeynta Tucson Pima si loo soo afjaro Guri la'aanta
by	Tagline Media Group	/ Jimco, 07 January 2022	/ Published in Ogeysiis laba-toddobaadle ah, Community, Featured
Arrinta #3- Ballanqaadka Hoggaanka ee Caddaaladda Jinsiyadda
Arrintaan, waxaan ku soo bandhigaynaa 7-da fal ee ugu horreeya ee lagu qeexay Wicitaanka Ficil: Ballanqaadyada Dadweynaha ee Cadaaladda Jinsiyadda ee Hoggaanka Ururka
Ha moogaanin cadadkayaga xiga kaas oo aan ku soo bandhigayno Talaabada 2 - Ka-qaybgalka Shaqada Cadaalada Jinsiga ee Wadajirka ah ee Ururka dhexdiisa. Ma sugi karaa? Riix halkan si aad u soo dejiso Wicitaan Ficil oo buuxa hadda.
Tallaabada 1: Hoggaanka Ururku wuxuu si guud u ballan qaadayaa Cadaaladda Jinsiyadda
Ururada qaar, kala duwanaanshiyaha, sinnaanta, iyo ka mid noqoshada shaqada ayaa ka socota, in kasta oo ay qarsoon tahay oo aan la shaacin dadweynaha.
Haddii aan si cad loogu dhawaaqin hoggaanka ururku in caddaaladda jinsiyadeed ay tahay mudnaan urureed, shaqadu uma badna inay saameyn weyn yeelato.
Shaqaalaha aan ku jirin jagooyinka hoggaaminta waxaa laga yaabaa inay naftooda halis weyn galiyaan cawaaqib xumo ama faquuqin marka ay ku dadaalaan isbeddello la taaban karo. Iyadoo ay muhiim tahay in lagu soo daro dadka ka socda dhammaan heerarka ururka, hoggaanku waa inuu door firfircoon ka ciyaaraa oo dejiyaa marxaladda isbeddel dhab ah.
Kirayso urur ama lataliye sumcad dibadeed si uu u fududeeyo shaqada cadaaladda jinsiyadeed ee hay'adda oo dhan.
Samee koox kala duwan oo loo xilsaaray hogaaminta dadaalkan oo magdhow dadka shaqadan dheeraadka ah. Kooxaha waa inay ku jiraan dadka midabka leh; si kastaba ha ahaatee, shaqada shaqaalaha midabka ee dadaalkan waa inuusan noqon mid qasab ah.
Muuji xiriir furan oo ku saabsan jinsiyadda iyo caddaaladda jinsiyadda.
Muuji rabitaanka ka qaybgalka wada sheekaysiga adag iyo rabitaanka isbedel.
Bilaw inaad tixgeliso oo aad ka dooddo dhammaan dhinacyada qaab-dhismeedka iyo nidaamyada hadda jira.
Ixtiraam oo qir shaqada dadka/kooxaha horeba shaqadan ugu qabanayay ururkaaga, oo geli booska ka qaybgale ahaan.
Waxay fure u tahay hoggaamiyeyaasha ururku inay qaataan waxa ay ka dhigan tahay inay bilaabaan samaynta caddaaladda jinsiyadda.
Hogaamiyayaasha ururka, kuwaas oo qaadi doona culayska dhaleecaynta dhinacyo badan, waxay isu diyaariyaan inay si firfircoon u dhegaystaan ​​oo ay helaan dhaleecayn.
Ku dhufo dheelitirnaanta jilicsan ee u dhexeeya rajada dadka midabka leh inay hoggaamiyaan shaqada iyo ka saarida dadka midabka gebi ahaanba.
Ogow in ururada qaar ee u haysta in ay cadaalada isir-sooca ku guulaysteen in ay yihiin kuwa dhibka ugu badan geysta.
Oggolow in qaar ka mid ah shaqaalaha ay diidi doonaan shaqada caddaaladda jinsiyadda lagana yaabo inay ka baxaan ururka.
Filo in jidku noqdo mid aan qummanayn oo shaqadu noqoto mid aan dhammaanayn.
Khayraadka loogu talagalay Hogaamiyaasha Ururka
Jadwal Kooban oo Jinsi iyo Hoyla'aaneed ee Ameerika
Jeff Olivet, Amanda Andere, Marc Dones, Britttani Manzo, iyo Jessica Venegas
Hagaha Ilaha Ka-hortagga Cunsuriyada: Noqoshada Hogaamiye Loo Dhan Yahay
Denise Martinez, Nicole Del Castillo, iyo Kenya Ferguson, Jaamacadda Iowa Healthcare
Sida Dadka Cadaanka ahi u qabsadeen Warshadaha aan faa'iido doonka ahayn
Ilaha Caafimaadka Dadweynaha ee Fahamka Cunsurinimada Deegaanka
Shahaadooyinka Caafimaadka Dadweynaha
Jinsiyada Hogaaminta: Kahortagga Farqiga Hoggaanka Jinsiyada ee aan faa'iido doonka ahayn
Sean Thomas-Breitfeld iyo Frances Kunreuther, Mashruuca Dhaqdhaqaaqa Dhismaha
4-ta Siraha: Qodobka Qarsoon ee Guddiyada aan faa'iido doonka ahayn iyo Isbeddelka Sinnaanta Jinsiga
Kelly Bates, Machadka Isdhexgalka ee Isbeddelka Bulshada
Lixda Astaamood ee Saxeexa Hogaaminta Loo Dhanyahay
20 Siyadood oo Daahsoon Sarraynta Cadaanka ah ayaa ka soo ifbaxda Samafalka iyo Samafalka
Vu Le, Aan macaash doonka ahayn AF
Dhaqanka Sareynta Caddaan - Weli waa halkan